Wenza umsebenzi obucayi olwandle
EZEMIDLALO uzizwa egazini lakhe uNksz Lindiwe Isabel Mchunu, owesifazane omnyama nongowokuqala ukuba yiSeagoing Operator eKZN Sharks Board, ophinde abe ngunompempe nomqeqeshi wababhukudayo
ZANELE MTHETHWA | June 26, 2020
UJWAYELE ukuthi avelele kuyo yonke indawo owesifazane osebe ngowokuqala omnyama ukuba yiSeagoing Operator eKZN Sharks Board, umsebenzi wakhe ohambisana nobucayi boshaka.
UNksz Lindiwe Isabel Mchunu waseBergville, ungene ngoMashi kulesi sikhundla kanti uzinze eRichards Bay, ngokomsebenzi. Uthi umsebenzi wakhe wukufaka amanethi emanzini nokuqinisekisa ukuthi abantu ababhukudi lapho kutshuza khona oshaka. Utshele Isolezwe ukuthi lo msebenzi obucayi futhi uma eya emsebenzini kunamathuba okuthi angabuyi ephila.
“Kumele wazi ukuthi kungenzeka isikebhe otshuza ngaso sicwile, okudingeka ukwazi ukutshuza uze uphumele ngaphandle olwande.”
Enaba ngomsebenzi wakhe uthe abantu babuye bangakhuzeki uma bebhukuda, bafune ukungena lapho kungaphephile khona. Kungumsebenzi wakhe ukuthi aphephise impilo yabo ngokuqinisekisa ukuthi abazibeki engcupheni yokudliwa ngoshaka.
UNksz Mchunu uthe wayengahlelile ukungena kulo msebenzi, okudalwe ukuthi ufundele ukubhukuda. Ubevele ethanda noma yini ehambelana nezemidlalo, okwenze wafunda iSports Management Science e-University of Zululand, Ongoye. Nakhona wafika wavelela njengoba waqala indaba yezemidlalo ayifica ingekho.
“Ngafika Ongoye ngo-2013 kungekho lutho oluphathelene nezemidlalo. Kwangikhathaza ukuthi ngizofunda ngezemidlalo kodwa akukho okwenziwayo. Ngakhuluma nabaphathi ngacela kwenziwe uhlaka lwezemidlalo, kwakhiwa neqembu elizodlala. Bamangala uma ngizikhetha ukuba ngusihlalo wohlaka, abanye bengangethembi ngoba ngiwumuntu wesifazane,” kusho yena.
Uthe ubedlala ibhola labesifazane enyuvesi, wabuye wayeka ngoba esengumphathi kwezemidlalo. Uveze ukuthi ngomdlalo wokuqala enyuvesi, bashoda ngonompempe njengoba abebekhethiwe bengafikanga.
Uthe akekho owafuna ukuvala isikhala, kwadingeka azijube. UNksz Mchunu uthe wayengazi lutho ngokuba ngunompempe kodwa wayibamba imidlalo kwaba sekugcineni. Emuva kwalokho wacela onompempe abanohlonze ukuthi bamqeqeshe.
Lokhu sekwenze nokuthi agcine engumsizi kanondweba esifundeni iKing Cetshwayo. Uke wadlalela neqembu labesifazane elibizwa ngeBuffalo khona eKing Cetshwayo.
UNksz Mchunu unekilabhu efundisa abadala nabancane ukubhukuda, iLim Swimming Club. Uthe ukubhukuda akukhulelwa njengoba kukhona nesalukazi esineminyaka engu-87 esisekilasini lakhe. Uphinde abe ngumqeqeshi weqembu lamabhiyisikili, elaqalwa nguye osekukhona nemincintiswano walo eKing Cetshwayo.